I-Treehouse De Valentine - I-Airbnb
I-Treehouse De Valentine
Balamban, Central Visayas, i-Philippines
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Mikheyla Fox
U-Mikheyla Fox Ungumbungazi ovelele
Imvelo nokunethezeka kwe-rustic endaweni eyodwa eziqukethwe ngokwayo kuyichaza kangcono i-Treehouse de Valentine. Ngokungajwayelekile ngenxa yezizathu ezifanele, le ndlu yamaphupho iyisidleke esihle kude nesiphithiphithi saseCebu City.
Yidla futhi uphumule enhliziyweni yemvelo – geza kubhavu wakho wokhuni, uqedele isikhathi esidlulelwe yisikhathi esifundwe kuvulandi, noma unethezeke emibhedeni elingana nenkosi kule ndawo yokuhlala enamagumbi amathathu okulala. Uma umphefumulo wakho uvuma, hamba uyobhukuda emanzini abandayo angapheli omfula wakho omncane!
OKUMELE ULINDELE NGAPHAKATHI KWENDAWO
I-treehouse ingahlalisa kuphela izivakashi ezifika kwezingu-8.
Kunamakamelo amabili abekwe esitezi esiphezulu, elinye linovulandi walo obheke ngasemfuleni. Womabili amagumbi anemibhede elingana nenkosi, elokuqala linemibhede emibili yokudonsa eyodwa. Zombili izitezi zinezindlu zokugezela ezigcwele (indlu yangasese neshawa); indawo engaphezulu inobhavu wokhuni. I-patio eseceleni komfula nayo ineshawa yayo. Kunama-hammocks amabili alungele ukuphumula eduze kwe-patio eseceleni komfula. Ishawa ephezulu kuphela enamanzi ashisayo. Zonke izindlu zangasese zine-bidet eyakhelwe ngaphakathi (uhlobo lwaseJapane).
Isitezi esiphansi siyindawo eyodwa enkulu ye-al fresco lapho ungathola khona igumbi lokuhlala, ikhishi, omunye umbhede, nomunye uvulandi. Izivakashi kufanele zikujwayeze ukwabelana ngesitezi esiphansi ndawonye njengoba kuyindawo evulekile.
Izindinganiso zethu zokuhlanza ziphezulu kakhulu kodwa lokhu akuqinisekisi ukuthi ngeke sihlangane nesicabucabu, ixoxo, isibankwa, umiyane, noma ezinye izinambuzane ngezikhathi ezithile. Sicela ungazami ukubathinta. Uma udinga usizo ngalokhu kuhlangana, sicela ungangabazi ukuxhumana nomunye wabasebenzi bethu bangaphakathi. Ungathuki, izilwane zingabangane.
Izivakashi zikhuthazwa ukuthi zilandele le miyalo:
- Dweba amakhethini amanethi omiyane avaliwe endaweni yokuhlala ngaphambi kokuba kumnyama.
- Gcina izibani zincane kakhulu ebusuku ukuze ugweme izinambuzane.
- Vula isibani sokubulala iziphazamisi bese usebenzisa isixosha isifutho sezinambuzane esinikeziwe.
- Uma kunemvula, cela uRene (umphathi wendawo) ukuthi ehlise i-canopy endaweni yokuhlala.
Kubalulekile ukucabangela konke lokhu ngaphambi kokubhuka - khumbula ukuthi niyizivakashi ezicwile emvelweni. Zilungiselele futhi ukuzizwisa okuphelele ngaphandle kwegridi.
Izivakashi zikhuthazwa ukuthi zihlole indawo. Bhuka nathi futhi uthole amagugu afihliwe asabalele endlini yezihlahla. Ukubhukuda nokugxuma rock-jumping yizintandokazi zezivakashi.
4.90 · 94 okushiwo abanye
I-Treehouse de Valentine ise Barangay Hingatmonan, Balamban, Cebu; cishe amakhilomitha angama-53.2 (ihora eli-1 nemizuzu engama-31) ukusuka edolobheni. Kuqhele ngamakhilomitha ayi-10.7 (imizuzu engama-23) ukusuka e-Gaisano Grand Balamban, inxanxathela yezitolo eseduze. Iqhele ngamakhilomitha angama-60 ukusuka eMactan Cebu International Airport (amahora ama-2). I-ATM eseduze iseGaisano Town Center, amakhilomitha ayi-6 ukusuka e-treehouse (20 min-drive).
Emaphandleni futhi ethokomele, uhambo oluya kule ndlu yezihlahla yamaphupho luhle kakhulu ekuqaleni nokuphetha uhambo. Kuvuza umphefumulo futhi ngaphezu kokubiza inani.
Ibungazwe ngu-Mikheyla Fox
Kunabasebenzi besikhathi esigcwele abangakusiza noma nini ngesikhathi uhlala. Bami endlini yezisebenzi ngaphakathi kwendawo esesangweni.
UMikheyla Fox Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Balamban namaphethelo